အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ လူကုန်ကူးခံရသူလေးကို အမည် နေရပ်လိပ်စာနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ လူကုန်ကူးခံရသူလေးကို အမည် နေရပ်လိပ်စာနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ လူကုန်ကူးခံရသူလေးကို အမည် နေရပ်လိပ်စာနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်
Posted by winkyawaung on Aug 27, 2010 in Myanma News |7comments
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ လူကုန်ကူးခံရသူလေးကို အမည် နေရပ်လိပ်စာနဲ့
ကမ္ဘာကြီးတောင် ရွာဖြစ်အောင်ကျဉ်းမြောင်းပစ်လိုက်နိုင်တဲ့ သတင်းမီဒီယာခေတ်ကြီးမှာ သတင်းသမားတွေအတွက် နေရာမရှားသလို တာဝန်ပိုကြီးလာတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။
သတင်းသမားတွေဟာ အခြားစာနယ်ဇင်းသမားတွေထက် ပိုပြီးကလောင်ကိုစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သတင်းသမားရဲ့ အတတ်ပညာ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တိုင်ထွာမှု ဥပဒေလိုက်နာမှု စာနာထောက်ထားမှုတွေ ပေါင်းစပ်ပါမှ သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
သတင်းဖြစ်ရင်ပြီးရော စာမူခရရင်ပြီးရော နာမည်ရရင်ပြီးရော….လို့ သဘောထားပြီး မရေးသင့်ပါဘူး။ (၁၇-၇-၂၀၁၀) နေ့ထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင်ရဲ့ (Crime, Corner) အခန်းကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ (……..) ဆိုသူရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြဖို့ ပေးရတဲ့ နေရာက လက်တစ်ဝါးသာရှိပေမယ့် အဲဒီသတင်းအတွက် ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ နစ်နာမှုက ဖော်မပြနိုင်လောက်အောင်ပဲပေါ့။ (ဓါးသွားထက် ကလောင်သွား ပိုထက်တယ်) ဆိုသမို့လား။
သတင်းရေးသူဟာ သတင်းသမားတွေ လိုက်နာစောင့်ထိမ်းအပ်တဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်း၊ ဥပဒေတွေကို မသိလို့ဘဲလား?။ သိပါရက်နဲ့ ကျူးလွန်လိုက်တာပဲလား? တော့မဆိုတတ်ပေမယ့် မသိလို့ပါဆိုပြီးလည်း မကျူးလွန်သင့်သလို သိပါရက်နဲ့ဆိုရင်တော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။
ဂျာနယ် စာစောင် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ မိမိရေးတာကို မိမိတာဝန်ယူနိုင်ရင် မည်သူမဆို ရေးနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ်တာဝန်ယူရမှာပဲပေါ့။ အရွယ်မရောက်သေးသည့် မိန်းကလေးအား ပြည်ပသို့ ရောင်းချသည့်အဖွဲ့ကို အရေးယူ…..လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါ။ လူကုန်ကူးခံရသူလေးရဲ့ အမည်၊ နေရပ်၊ လိပ်စာကို အတိအကျဖော်ပြထားတာ တွေ့လိုက်ရတော့ သွားပြီလို့ ရေရွတ်လိုက်မိပါရဲ့။ ( ကလောင်သွားထက် ဥပဒေသွားက ပိုထက်တယ်) လို့ သိထားလေတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးတော့မှာပဲ…..?…။
သတင်းအနေနဲ့ ရေးတာ ပြည်သူတွေ သတိတရား ဆင်ခြင်စေဖို့.. ဒီလိုကြီးရေးတော့ တဖက်သား ဘဝအားငယ်ရတဲ့ အထဲ နိမ့်ကျအောင် လုပ်တာ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ စာပေစိစစ်ရေးက မမြင်လို့ လွတ်ပေးလိုက်သည်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရမလို ဖြစ်နေပြီ
အင်း.. စာပေစီစစ်ရေးဆိုတာကတော့ အဓိက သူတို့ဆရာကြီးတွေအတွက် အကာအကွယ်တစ်ခုပါကွယ်။ ပြည်သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ် သူတို့အာဏာရှင်ကြီးတွေကို မထိရင် ပြီးတာပါပဲ..ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စာပေစီစစ်ရေးအဖွဲ့ပါ လို့ဆိုပါရစေ..။
သိတ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျာ… ကိုယ်ချင်းစာသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်… အဲ့သည့်သတင်းထောက်က သူ့အမျိုးသားချင်းထဲက တစ်ဦးဦးသာ ဒီလို ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ ဒီလိုမျိုး detail info ပေးနိုင်ပါ့မလား?
ဒီလိုအသက်မပြည့်သေးသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အရင်ကထဲက တချို့မှုခင်းစာအုပ်၊ဂျာနယ်တွေမှာ ဖေါ်ပြခဲ့ဖူးကြလို့ ဝိုင်းပြီးကန့်ကွက်ဆွေးနွေးကြတာ ကြားဖူးဖတ်ဖူးပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းသမားတိုင်း သိရမဲ့ အခြေခံကျင့်ဝတ်ပါ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဆက်ရှိနေဆဲဆိုတော့ တမင်များလုပ်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံရှဲ့ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ် ဥပဒေတွေကပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားလို့ များလား။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ မြန်မာပြည်မှာက နိုင်ငံရေးလုပ်တာကလွဲရင် ဘိန်းပဲရောင်းရောင်း၊ ဖာခန်းပဲထောင်ထောင် ခွင့်ပြုထားတာမိုလို့ပါ။
သတင်းကို ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြတာကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ပြည်တွင်းဂျာနယ်တစ်စောင်သို့ မှားနေကြောင်းကို ထည့်ပေးတာ စာပေစီစစ်ရေးက ဖြုတ်သတဲ့ခင်ဗျာ..။ သတင်းဓာတ်ပုံဖော်ပြထားတဲ့ ဂျာနယ်က ဒုတိယ နေရာကသတင်းဂျာနယ်ကြီးပါ။ ရေးတဲ့သတင်းထောက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲမင်းကြီးရုံးကခေါ်စစ်ပြီး.. ဘယ်လိုနာလည်မူယူလိုက်တယ် မသိပါဘူး..။ ယနေ့အထိ အဲဒီ သတင်းထောက် ဘာာမှ အရေးယူမခံရပါ။ သတင်းအရေးခံရတဲ့ ကာယကံရှင် ကောင်မလေးတွေဘက်ကလည်း တရားစွဲဖို့နေနေသာသာ စားစရာတောင်မရှိဘူးတဲ့လေ..။ မြန်မာပြည်မှာ ငွေများရင် တရားမဖြစ်.၊ဟု သာ.. အများကသိထားကြပါပြီ..။
သတင်းသမားကျင့်ဝတ်အရ ဒါမျိုးအမှုတွေကို နာမည်မဖော်သင့်ဘူးဆိုတာကတော့ သတင်းထောက်လုပ်မယ့် လူတိုင်း သိသင့်တဲ့အရာပါ။ သတင်းထောက်က သင်တန်းကောင်းကောင်း မတက်ရသေးလို့ မသိဘဲ ထည့်ရေးရင်တောင် သတင်းကို တည်းဖြတ်တဲ့ အယ်ဒီတာက ဖြုတ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါကြောင့် ဒိသတင်းအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသူကတော့ သတင်းထောက်နဲ့ အယ်ဒီတာပါပဲ။ စာပေစိစစ်ရေးကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ညိမညိပဲ မှန်ဘီလူးနဲ့ရှာမှာပါ။ မတွေ့ရင် လွှတ်ပေးလိုက်မှာပဲ။ သတင်းသမားကျင့်ဝတ်တွေဘာတွေ နားလည်မယ့်ကောင်တွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။